Nhau - Iyo Kugadzira Maitiro Ekambani Yedu
Kugadzirwa kwePulp kuumbwa zvakajairika kunosanganisira kugadzirira pulp, kuumba, kuomesa, kupisa kudzvanya uye mamwe maitiro.
1. Kugadzirira kwemaspuru
Kugunun'una kunosanganisira nhanho nhatu dzekuumba mbichana, kupururudza uye kupuruzira. Chekutanga, iyo yekutanga faibha inodonhedzwa mu pulper mushure mekuongorora uye kupatsanura. Ipapo pulp inorohwa, uye iyo fiber inopatsanurwa neiyo pulper yekuvandudza iyo inosunga simba pakati peiyo pulp yakaumbwa zvigadzirwa. Nekuti saizi yeyero, kuomarara uye ruvara zvakasiyana, kazhinji zvinoda kuwedzera yakanyorova simba mumiririri, sizing mumiririri uye mamwe makemikari ekuwedzera, uye gadzirisa saizi yevasungwa uye pH kukosha.
Parizvino, yedu pulp Kuumbwa kwacho ndiko kuti Vacuum Anoumba nzira. Vhavha yekuumba inzira iyo yekufa yakadzika inonyudzwa mune slurry dziva uye iyo tambo mune slurry dziva dzakapindirana kunyura pamusoro nekumanikidza uye yekumusoro kufa yakavharwa. Isu takashongedzerwa nemuchina wekusimudza wekusimudza, unokodzera kugadzirwa kwehukuru hwakakura uye zvirevo, kudonhedza kukwirira zvinodiwa kwepakadzika mapepa uye zvigadzirwa zvepurasitiki.
Yakaomeswa yekumanikidza zvigadzirwa inoda kuomeswa, kazhinji kushandisa kuomesa nzira yekuomesa uye firimu kuomesa. Kambani yedu inoshandisa nzira yekuomesa yekuomesa. Hunyoro hwehupamhi hwakaumbwa nyoro embryo inogona kusvika 50% ~ 75%, mushure meiyo fosi yepasi yakanyura uye ikasanganiswa neyepamusoro chakuvhuvhu, uyezve inogona kuderedzwa kusvika 10% ~ 12% mushure mekuomesa. Wet kumanikidza zvigadzirwa kazhinji hazvidi kuoma.
4. Kupisa kupisa
Mushure mekugadzirwa kwemaspuru kuumbwa zvapedziswa, zvinobva zvamanikidzwa nekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kukuru kuita kuti pulp yekugadzira zvigadzirwa iwedzere kuumbika, zvirinani michina zvivakwa, uye ita chimiro nehukuru hwechigadzirwa tembiricha, rusvingo rweukobvu yunifomu, yakatsetseka uye yakati sandara. nzvimbo yekunze. Iyo yekuumba maitiro kazhinji inotora yakakwira tembiricha muforoma (kazhinji 180 ~ 250 ℃) uye yakakwira kumanikidza pulp kudzvinyirira iyo pulp kuumbwa mushure mekuomesa, uye inopisa inopisa nguva iri kazhinji 30-60s.
5. Kuchekerera nekupedza
Mushure mekuguma kwekutsvaira kunopisa, chigadzirwa chichatemwa kuti chigadziriswe chigadzirwa. Mushure mekucheka, zvimwe zvigadzirwa zvinozogadziriswa mumashure ekugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, senge padhinda yekudhinda, grooving zvichingodaro.
6. Kuongorora nekupaka
Mushure mekupedza ese ekugadzira uye ekugadzirisa matanho, isu tine hunyanzvi hwemhando yekudzora vashandi kuti vaone zvigadzirwa, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kubvisa zvimwe zvisina kukwana zvigadzirwa.Pakupedzisira kusangana nezvinodiwa zvekugadzira kurongedza.
Chikafu Giredhi Kuteedzera Pulp Mabhokisi, Chikafu Packaging Bhokisi, Mhando dzese dzeKudhaya Kuputira Pulp Holder, Akasungwa Pulp Tereyi, Kurumidza Chikafu Packaging Bhokisi, Kudhaya Kuputira Pulp Holder,